Aluminium Fiberglass Maro Cajalad |
Waxaan nahay mid ka mid ah alaab -qeybiyeyaasha caanka ah ee loogu talagalay Aluminium Foil Fiberglass Maro Tape ee Shiinaha oo leh xoogga qiimaha ugu fiican, tayo sare leh, gaarsiinta degdegga ah iyo adeeg kaamil ah.
Badeecadayada ayaa mar horeba loo dhoofiyay Ameerika, Yurub, Australia, Bariga Dhexe, iwm.
Dhumucda bireed aluminium, width cajalad, dhererka cajalad, iwm la beddeli karaa.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Aluminium -Foil Fiberglass Maro Tape waa dharbaaxo.
Aluminium Fiberglass Maro Tape wuxuu ka samaysan yahay fiberglass ka samaysan dahaarka-bireed aluminium dahaarka leh wax-qabad sare-ku-saleysan/dardaro-caag ah cadaadis-xasaasi ah oo dhejis ah oo ka kooban PE oo daboolan warqad siideynta silikoon ah.
Taageerada marada Aluminium & Fiberglass waxay siisaa sifooyin milicsiga aad u fiican kulaylka & iftiinka labadaba
Awood xoog badan.
Caqabada uumiga ugu habboon sababtoo ah heerka gudbinta uumiga oo hooseeya.
Ku habboon daboolidda marinnada iyo ku biiridda nidaamyada HVAC (Heat, Ventilation & AC).
Waxaa loo adeegsaday wadajirka guddiga godadka & tolidda; ku biiritaanka & xiridda tuubooyinka warshadaha & dahaarka tuubada
Muraayadda muraayadda dhalada aluminium -bireedku si joogto ah ayuu u jeexmaa, waa la jiidi karaa. Badeecadaha dabka dhaliya, xoogga gilgilashada sare, xoogga jebinta, iska caabbinta jeexista, substrate jilicsan, dhejinta dhejiska, waxqabadka dab -damiska oo wanaagsan.
Waxay leedahay caqabad uumiga oo aad u fiican iyo xoog farsamo oo aad u sarreeya iyo iska -caabbinta oksaydhka, oo leh isku -duubnaan xooggan, iska -caabbinta daxalka iyo aashitada daciifka ah iyo iska -caabbinta alkaliinka.
Ku habboon daboolidda daboolidda kala -goynta iyo dahaarka kuleylka iyo uumiga uumi -mareenka HVAC iyo tuubooyinka biyaha qabow/kulul, gaar ahaan xiridda tuubada ee warshadaha dhisidda maraakiibta.
Ka -hortagga baxsiga hawada, dib -u -hagaajiyaha ololka degdegga ah, gaashaanka iyo ka -hortagga faragelinta
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato Aluminium Foil Fiberglass Maro Tape, fadlan nala soo xiriir annaga oo aan ka labalabeyn. Waxaan hubnaa in wax su'aalahaaga ka mid ah ay heli doonaan fiiro gaar ah & jawaab.
Hore: Cajalad Laba-Dhinac Warshadeed leh
Xiga: Cajalad -bireedka Aluminium oo la xoojiyay
Nadiifinta Qaboojiyaha Aluminium -bireed
Ilaalinta Kulaylka Cajaladda Aluminium -ka
Dahaarka milicsiga Aluminium -bireed
Dahaarka bireedka kuleylka ah
Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Sharooto,